Dalalka UNWTO waxay u baahan yihiin Samatabbixin iyo Sacuudi Carabiya oo Balaayiin ku jawaabtay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Dalalka UNWTO waxay u baahan yihiin Samatabbixin iyo Sacuudi Carabiya oo Balaayiin ku jawaabtay
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Sacuudi Carabiya Warka • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Baaqa degdegga ah ee dalxiiska
911, waa maxay Gurmadkaagu? Sacuudi Carabiya ayaa ka jawaabaysa Xiisadda Dalxiiska Adduunka iyadoo Balaayiin Doollar ku bixinaysa. Hal waddan ayaa samaynaya wax ka badan hadal, waxay ku bixinaysaa lacag culus sidii loo badbaadin lahaa socdaalka adduunka iyo warshadaha dalxiiska - tanina ma aha hawlgalkii ugu horreeyay ee wax -qabad.
"Waxaan sameyneynaa taariikh maanta!" Kani waa warbixinta xiddig dhalaalaysa ee warshadaha safarka iyo dalxiiska eTurboNews oo la daabacay 6 -dii Oktoobar ee sannadkii hore.
Xiddiggu wuxuu ahaa haweeneyda ugu saameynta badan dalxiiska xilligaas, Gloria Guevara. Waqtigaas waxay ahayd maamulaha guud ee Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka (WTTC). Wax yar ma aysan ogeyn inta dhaqaajisa iyo ruxruxidda wershadan heerkan waaxdan iyo dunidaba aysan weli arkin inay maanta noqon karto.
Maanta Xarunta warshadaha safarka iyo dalxiiska ayaa hal meel isugu imaanaysa: Riyaad, Sacuudi Carabiya. Tani waxaa laga yaabaa inay ku lug yeelato tallaabadii ugu horreysay abid ee UNWTO (Ururka Dalxiiska Adduunka) ee xaruntiisa Spain looga raro Sacuudi Carabiya.
Mustaqbalka iyo soo kabashada mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn caalamka ayaa laga yaabaa inay ku jirto gacanta ummad fadli badan, Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Hoggaamiyaha leh himiladda 2030 -ka oo ka dambeysa waxyaalahan oo dhan, haddii lagu guuleysto, wuxuu noqon doonaa Wasiirka Dalxiiska ee Sacuudiga, Mudane. Ahmed Al-Khateeb. Marwada ka dambaysa dib-u-habaynta dalxiiska adduunka ayaa laga yaabaa inay noqoto agaasimihii hore ee WTTC, Gloria Guevara oo u dhalatay Mexico, oo hadda la-taliye sare ula ah isla wasiirkan, Axmed Al-Khateeb.
G20 ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ahayd maalintii Gloria Guevara ay heshay dalab shaqo, ma diidi karto. Sababta ay u diidi kari weyday ma aha oo kaliya mushaharka caafimaadka leh ee dalka Sacuudi Carabiya uu awoodi karo laakiin joogteynta dib u soo nooleynta safarka iyo dalxiiska adduunka.
Sida xaqiiqda ah, Sacuudi Carabiya waxay ku qarashgareysaa ku dhawaad ​​500 Billion US-Dollar si ay u dhisto warshadaha dalxiiska adduunka labadaba dalkeeda, laakiin sidoo kale caawinta iyo maalgelinta kuwa kale.
In kasta oo lacagtu ay qalalan tahay inta badan waddammada si dib loogu dhigo warshadan, Sacuudi Carabiya oo hodanka ku ah saliidda waxay u aragtaa maalgelinta dalxiiska oo kaliya inay tahay fursad guul/guul laakiin ay tahay wax ku biirinta adduunka.
Bishii Maajo 2021 WTTC oo uu hoggaaminayey Gloria Guevara waxay ku guuleysatay shirweynihii ugu horreeyay ee caalami ah ee hoggaamiyeyaasha dalxiiska si ay isugu yimaadaan Cancun, Mexico.
Ujeeddadeeda ah in ay noqoto Maamulaha WTTC, oo ah urur leh shirkado ugu waa weyn safarka iyo dalxiiska oo xubin ka ah, ayaa ahayd in ay badbaadiso waaxda gaarka loo leeyahay. Guevara wuxuu raadinayay isuduwidda caalamiga ah. Jawaab ayaa ka timid Sacuudi Carabiya oo lagu soo xiray oo lagu casuumay ka qeybgalka G20. Tani waxay ahayd markii ugu horreysay ee lagu casuumo daneeyayaal gaar ah.
Tani waxay ahayd waxa loo baahan yahay warshadaha gaarka loo leeyahay, iskaashi dawladeed iyo mid gaar loo leeyahay kuwa wax ka beddeli kara.
Shirkii ugu horreeyay ee safarka iyo dalxiiska adduunka tan iyo markii uu dillaacay COVID-19 ayaa dhacay. Goobtu waxay ahayd magaalada loo dalxiis tago ee Cancun ee Mexico. Gloria Guevara oo sharaf leh, oo haysatay jagada Xoghayaha Dalxiiska ee Mexico laga bilaabo Maarso 10, 2010, ilaa Noofambar 30, 2012, ayaa soo gabagabeysay shirweynihii guul ee isgaarsiinta iyo rajada adduunka dalxiiska.
Yaa ka maqnaa Mexico, wuxuu ahaa Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili.
Zurab si kastaba ha ahaatee kama maqna Sacuudi Carabiya. In kasta oo mowqifkiisa rasmiga ahi yahay inuusan wax dhibaato ah ku qabin dalka ay martida u tahay UNWTO ee Spain, UNWTO waxay durba xafiis ka furtay Saudi Arabia.
Sida laga soo xigtay warbaahinta Spain, diblomaasiyiinta Spain iyo Sacuudi Carabiya ayaa aad ugu mashquulsanaa goobta.
Qaar badan oo ka mid ah xubnaha UNWTO, gaar ahaan gobollada xubnaha ka ah UNWTO ee aan xubin ka ahayn guddiga fulinta sharafta leh ee wakaaladda ku xiran Qaramada Midoobay waxay dareemayaan inay ka tageen UNWTO tan iyo markii Zurab uu qabtay hoggaanka. UNWTO ma haysato dadka, lacagta, iyo kheyraadka si ay isbeddel weyn ugu sameyso xubnaha lacag siiya. Xubnuhu waxay inta badan dareemaan in aan laga tagin oo keliya ee ay go'an yihiin. Xubinnimada UNWTO ma aha mid raqiis ah, gaar ahaan marka warshaduhu maraan qalalaasihii ugu xumaa abid.
Dhammaan arrimahan ayaa laga yaabaa inay dhammaadaan haddii UNWTO HQ loo wareejin karo Sacuudi Carabiya, oo lagu qasbi doono inay mar kale la shaqeyso hay'ado kale, sida WTTC. Qoraalka ayaa durbadiiba gidaarka saaran. UNWTO iyo WTTC labaduba waxay mar hore ka fureen xafiis goboleed Riyaad. Tan waxaa looga dhawaaqay G20. Sacuudi Carabiya waxay diyaar u tahay inay badbaadiso oo dib u soo celisobilaabi dalxiiska. Ururo kale ayaa ku jira hawsha, in badan ayaa ka fikiraya inay cagaha ku yeeshaan Sacuudi Carabiya.
Meel fagaare ah, Spain ayaa ilaa hadda aamusan, laakiin sida laga soo xigtay ilo lagu kalsoon yahay oo ku sugan Madrid, Spain ayaa xanaaqsan. Markii lala xiriiray eTurboNews, wasaaradda dalxiiska ee Madrid ayaan ka jawaabin.
Sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah ee Madrid, mas'uuliyiinta Spain waxay soo jeediyeen dib-u-habayn waqti dheer ah oo lagu sameeyo Xarunta UNWTO ee hadda si loo dhammaystiro khaladaadka sida marti-geliyaha joogtada ah.
Tani si kastaba ha ahaatee waxaa laga yaabaa inay soo daahdo wax yar, maadaama dalalku ay garaaceen albaabka Sacuudi Carabiya si ay u taageeraan u guuritaanka Xarunta UNWTO ee Boqortooyada.
Dal walba wuxuu u baahan yahay maalgashi iyo maalgelin marka laga hadlayo dalxiiska, Sacuudi Carabiyana waxay durba ka jawaabtay wicitaanno badan oo degdeg ah.
Xiddigga ku guuleystay abaal-marinta ee WTTC Summit ee Cancun wuxuu ahaa, shaki la’aan, wasiirka dalxiiska oo ka yimid Sacuudi Carabiya. Ergooyin badan ayaa u sheegay eTurboNews sababta ugu weyn ee ay uga soo qeybgaleen shir madaxeedka ayaa ahayd inay la kulmaan wafdiga Sacuudiga. Lacag ayaa lagaga hadlay Cancun oo hadda hadlaysa.
Wasiirka ka socda Sacuudi Carabiya wuxuu abaalmarino iyo aqoonsi ku helay Cancun markii madaxa WTTC Gloria Guevara ay albaabada u furtay waxaan maanta aragno.
Waxaa jira wax badan oo la sameeyo, thalkan waa caddaalad darro iyo caqabado badan eTurboNews ayaa laga soo sheegay shir -madaxeedka.
Waxaa jiri doona berri cusub oo loogu talagalay dalxiiska la saadaaliyay eTurboNews daabacaha Juergen Steinmetz bil uun ka hor. Tani berri cusub ama qaarkood waxay leeyihiin caadi cusub ayaa laga yaabaa inuu durba bilaabay. Waxay u muuqataa in Sacuudigu u soo ifbaxayo sidii mufakir iyo hoggaamiye cad.
Waxaa jira dad badan oo ka hadla dunida dalxiiska. Waxay ka kooban yihiin agaasimayaal guud, wasiirro, iyo madaxda ururrada. Waddan kastaa wuxuu leeyahay hal dhibaato oo ay wadaagaan: Dhibaatadu waxay tahay in aysan jirin wax xal ah, lacag aan xitaa ka doodno xalalka la heli karo. Qofna ma yaqaanno sida loo badbaadiyo safarka iyo dalxiiska iyo malaayiin daneeyayaal ah oo shaqeeya.
Markaad saaxiib kula joogto Riyadh, riyooyinku si fiican bay u rumoobi karaan. Waxaa laga yaabaa inay qaali yihiin, laakiin waxaa jira xalal, Sacuudiguna wuxuu ka jawaabayay wicitaannada 911 (112) saaxiib ahaan iyo ummad u muuqata inay danaynayso warshadan, dadka ka shaqeeya qaybtan, iyo dalal kale oo xaalad adag ku jira .
Ka dib oo dhan, inkasta oo dalxiisku uusan ku cusbayn Sacuudi Carabiya, u furitaanka dalxiiska reer galbeedka Boqortooyada waa mid cusub, iyo caawinta adduunka intiisa kale waxay noqon kartaa arrin dhaqan, laakiin sidoo kale fursad ganacsi mustaqbalka fog ee boqortooyada.
Mudane. Edmund Bartlett iyo HE Ahmed Al Khateeb si ay ugu kulmaan Shir Madaxeedka Soo -kabashada Dalxiiska Afrika
Xageen hadda taaganahay?
Markaad eegto heerka wasiirnimo, wasiiro fara ku tiris ah ayaa isku dayaya inay isbeddel sameeyaan. Waxaa ka mid ah hubaal Hon. Edmund Bartlett oo u dhashay Jamaica.
Bartlett iyo Al-Khateeb saxeexay dukumenti qashin ahd dhawaan, labaduba waxay xiran yihiin koofiyad Bob Marley. Bartlett diiraddiisa caalamiga ah ayaa si cad loogu beddelay Sacuudi Carabiya.
G20 ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ahayd maalintii Gloria Guevara ay shaqo ka heshay Sacuudi Carabiya, ma aysan diidi karin. Waxa kale oo ay ahayd dhacdadii Sacuudi Carabiya u ballanqaaday balaayiin Doollar oo taageero caalami ah oo loogu talagalay waaxda- oo ay fulinayso ballantii.
Muxuu u malaynayaa Guddoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka:
Juergen Steinmetz, oo ah guddoomiyaha ururka Shabakada Dalxiiska Adduunka iyo martida u ah dib u dhiska safarka wada hadalku wuxuu yiri:
"Dalxiiska Adduunka wuxuu u baahan yahay kaalmo, Sacuudi Carabiyana way ka jawaabaysaa. "
Steinmetz, oo sidoo kale ah daabacaha eTurboNews wuxuu raaciyay: “WTN waxay dhowaan bilowday mid aad u firfircoon Kooxda danaha Sucuudiga hoggaanka Boqorka Boqortooyada Dr. Abdulaziz Bin Nasser Al-Saud.
“Runtii maahan inaad u muuqato inaad siiso awoodda dalxiiska hal dal. Waxay ku saabsan tahay la shaqaynta kuwa sameeya oo kaliya ma aha kuwa raacsan iyo kuwa hadalka leh. Sacuudi Carabiya waa wax -qabad waxayna muujisay hoggaamin badan xagga warshadaha safarka iyo dalxiiska intii lagu jiray dhibaatadan marka loo eego inta badan waddamada kale marka la isku daro.
“Sacuudi Carabiya waxay lacagteeda ka dhigtaa ballan -qaadyo. Wax khalad ah halkan kuma arko. Dalxiisku wuxuu ahaan doonaa warshad hawlo badan oo goboleed. Ka dib oo dhan, badiyaa waa warshad danayste ah oo meelahu ku tartamaan midba midka kale.
“In xarun xarun dalxiis lagu helo hal meel waa fikrad aad u fiican. Haddii marti -geliyaha xarunta caynkaas ah uu haysto lacag uu ku shaqeeyo, waxay u egtahay guul u soo hoyatay adduunka safarka iyo dalxiiska.
“In aad yeelato xarun caalami ah oo dalxiiska micnaheedu ma aha in dunidan ay abuureyso fikrad caalami ah ama dowlad caalami ah oo loogu talagalay dalxiiska. Wax shaqo ah kuma lahan fikirka siyaasadeed ee dalka martida loo yahay. Fikirka waddan waligiis ma xukumi doono Dalxiiska Adduunka. Tusaale ahaan Qaramada Midoobay ma aha hay'ad Maraykan ah, inkasta oo ay martigalisay Maraykanka. Waxaa laga yaabaa inay tahay dhanka kale. In dunida la isu keeno dal martida loo yahay wuxuu baran karaa, qaadan karaa oo furan karaa fikrado iyo dhaqammo cusub.
“Haysashada Xarunta Dalxiiska oo hal meel ah ma beddeli doonto sida kala duwan ee dalxiiska loo arko waxayna ka hawlgashaa meelo kala duwan oo adduunka ah. Waa adduun yar ka dib, Zoom ayaa tan na tusay dhammaanteen.
“Waa inaan sacab ku soo dhoweynaa Sacuudi Carabiya sida ay nooga jawaabtay taleefanno badan oo 911 ah. Dalku wuxuu noqonayaa jawaab -celiyihii ugu horreeyay ee warshadeena wuxuuna haystaa agabkii lagu caawin lahaa. Sacuudi Carabiya ilaa hadda waxay u jawaabaysay si naxariis leh oo dhoola cadaynaysa. ”
Jane Folsom wuxuu leeyahay,
Ogosto 12, 2021 markay tahay 05:53
Waan ka xumahay Juergen, kuma qanacsana mana qancin tani waa fikrad xigmad leh. Waa maxay sababta Sacuudi Carabiya loo qaabilay markii aysan weli bixin wax natiijo sharci ah oo ku saabsan dilka iyo kala goynta xubin ka tirsan kooxda warbixinta Washington Post..Jamal Khashoggie? Ka waran shirqoolka lagu burburinayo Xarumaha Ganacsiga Adduunka ee NYC 20 sano ka hor oo laga soo maleegay boqortooyada…
Sababtoo ah waddanku wuxuu leeyahay lacag-miyey taasi la mid tahay wanaagga? Shiinuhu sidoo kale wuxuu leeyahay lacag aad u tiro badan-waa maxay sababta hoggaanku uusan u shukaansanin?